လီးနှစ်​ချောင်းအထိအ​တွေ့ – Grab Love Story
အဲဒါမျိုးညှစ်ပေးတာမျိုးက…ချစ်ချစ်အရမ်းဖီးတက်နေတဲ့… အချိန်မျိုးမှဖြစ်တာလေ။(ကျနော်မိန်းမကိုကျနော်က…ချစ်ချစ်လို့ခေါ်တာ.)အဲဒါနဲ့ပဲ…စောက်ဖုတ်ထဲကို…လက်နောက်တစ်ချောင်းပါထပ်ထည့်ပြီး…လက်နှစ်ချောင်းနဲ့အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးနေလိုက်တယ်။
ကျနော်ကတော့…ချစ်ချစ်ရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကိုပဲကိုင်ပြီး… နောက်ကိုနဲနဲခွာလိုက်တာပေါ့။ဘော်ဒါကသူ့လီးနဲ့ချစ်ချစ်ဖင်တွေကို…ပွတ်နေတာဖြစ်မယ်။ချစ်ချစ်ကဖင်တွေကိုနောက်ကိုကော့ပြီး…စကောဝိုင်းနေတာတွေ့တယ်။ဘော်ဒါရဲ့လက်တစ်ဖက်…စကတ်ပေါ်ကနေစောက်ဖုတ်ကိုပွတ်။နောက်လက်တစ်ဖက်..နို့နှစ်လုံးကိုပယ်ပယ်နယ်ကိုကိုင်နေတာ။
“တင်းနေတာတွေကပေါက်ထွက်တော့မယ်…လျှော့ဖို့လိုအပ်နေပြီေ..လဟုတ်တယ်မလား ချစ်ချစ် ”
“ငါတို့ရပ်ကွက်မှာမီးပျက်နေတာ…ပျင်းစရာကြီးမင်းတို့နဲ့ ဟော်တယ်မှာပဲလိုက်အိပ်တော့မယ်..စကားလေးဘာလေးပြောရတာပေါ့ ”
” အေး အဲဒါတော့.. မင်းသဘောပဲ ”
“ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကို..အခုကိုကိုနှိုက်ပေးတာနဲ့ စောစောကကိုကို့ဘော်ဒါနှိုက်ပေးတာ..ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ။ပြီးတော့…ကိုကိုလီးနဲ့ဟိုကောင့်လီး…ဘယ်သူ့ဟာပိုကြီးလဲဟင် ချစ်ချစ်”
” ကိုကို ကလဲ ဘာတွေမေးနေမှန်းလဲ. မသိဘူး ”
” ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကိုဟိုကောင်နှိုက်နေတာ. သူ့လီးကို. ချစ်ချစ်ပွတ်ပေးနေတာ..ကိုကိုမြင်နေတာပဲဟာ..
“ချစ်ချစ်လဲဟိုကောင်နှိုက်ပေးတာ …သူ့လီးကို ကိုင်ရတာဖီးလာတယ်မလား ”
“ကိုကိုနှိုက်တာကျတော့…ကိုကိုကချစ်ချစ်ယောက်ျားလေ။ ကိုကို့သူငယ်ချင်းနှိုက်တာကျတော့…သူစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်လေ။…ပြီးတော့…ကိုကိုရှေ့တင်အနှိုက်ခံနေရတာဆိုတော့…ပိုကောင်းတယ်ထင်တာပဲ။သူ့လီးကကိုကိုထက်ပိုကြီးတယ်ထင်တယ်။ဘောင်းဘီပေါ်ကကိုင်ရတာကို..သိသာတယ် ဟိဟိ.. ”
” အဲဒါဆို…အခုသူ့လီးနဲ့လိုးတာမခံကြည့်ချင်ဘူးလား” လို့မေးလိုက်မိတယ်။ဘာလို့အဲလိုမေးလိုက်မိမှန်း…ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်မသိလိုက်ဘူး။
” ကိုကိုပြောနေတာနဲ့ ချစ်ချစ်လေ… စောက်ဖုတ်ထဲကရော.. ဖင်ထဲကရော.. ယားလာပြီကွာ။ကြမ်းကြမ်းလေးနှိုက်ပေးပါ။ တစ်ကယ်တောင်..အလိုးခံချင်လာပြီ ဟိဟိ ”
“ငါ့မှာဆေးလိပ်ပါမလာလို့…မင်းမှာရှိသေးလားလို့..လာတောင်းတာ.. ဟီးဟီး ”
” ဟာ…ကောင်းခန်းရောက်နေပြီလား… ငါလည်း…အဲဒီကောင်းခန်းကိုကြည့်ချင်နေတာ ဟီးဟီး”
“စောက်ခွက်ပြောင်မနေနဲ့..ဆေးလိပ်ဗူးကပိုက်ဆံအိတ်ဘေးနားမှာ..ထားထားတယ်။ ယူမသွားနဲ့…ဆေးလိပ်ကနဲနေပြီ.. အခန်းထဲမှာပဲသောက် ”
” ချစ်ချစ်ကတော့…ဂရုမစိုက်ပေါင်…ပရိတ်သတ်ရှိလို့ကတော့ ..ပိုတောင်လုပ်ပြလိုက်အုံးမယ် ”
“ကိုကို..ချစ်ချစ်ရေချိုးခန်းထဲသွားလိုက်အုံးမယ်…ကိုကို့ဘော်ဒါကိုမေးလိုက်ပါအုံး…ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကိုလုပ်ချင်ရဲ့လားလို့….တော်ကြာ..ချစ်ချစ်တို့ကလုပ်ခိုင်းလို့လုပ်ရပါတယ်ဖြစ်နေအုံးမယ်။.”ခိခိ…ကိုကို့ဘော်ဒါချစ်ချစ်ကိုလိုးချင်တယ်ဆိုလည်း…ချစ်ချစ်ဘာတွေကြိုက်တယ်ဆိုတာ . ပြောထားလိုက်အုံး။ ကိုကို့ ကိုမှ မမှီရင် sorry ပါလို့ . ခစ်ခစ် ”
“ဟေ့ကောင်…ဇာတ်ကြီးလဲ လိမ်သွားအုံးမယ်. ..”
“သဘောတူပါတယ်ကွာ…မင်းတို့စိတ်တိုင်းကျရပါစေမယ်..။ ဟီးဟီး.. မင်းပြောတာကိုသာမင်းမဖျက်နဲ့ .. ”
“အေး.. ငါချစ်ချစ်ပြန်ထွက်လာရင် ပြောကြည့်လိုက်မယ်”
“ကိုကိုတို့..ဘာတွေပြောနေကြတာလဲ..ချစ်ချစ်ကိုမဟုတ်တာတွေ..ကြံစည်နေတာမလား … ”
“မချန်ထားပါဘူး…. ကိုကိုရဲ့ ”
“ကိုကိုသူငယ်ချင်းအသက်ကို…အရင်ကယ်လိုက်ပါမယ်ကိုကိုရယ်..။တော်ကြာသေသွားမှဖြင့်..ချစ်ချစ်တို့အမှုပါတ်နေပါအုံးမယ်….ကိုကို့..ကိုရှယ်ပြန်ပြုစုပေးမှာပါနော်…။ကိုကိုတို့ပြောနေတာနဲ့…ချစ်ချစ်စိတ်တွေအရမ်းလာနေပြီကွာ…။အပြောလေးတွေရပ်ပြီးအလုပ်လေးတွေစရအောင် .. ”
“အား…ကောင်းလိုက်ာ….ကျမရဲ့စောက်ပတ်ကိုယက်ပေးစမ်းပါ…လက်တွေနဲ့လဲ…နှိုက်ပေးစမ်းပါ..အား..မိုက်တယ်ကွာ. အရမ်းကောင်းတာပဲ .”
“မောသွားလား ကိုကို့မိန်းမလေး ”
“အင်း နဲနဲတော့မောတယ် ”
“အင်း.ပြီးသွားတယ်..ဒါပေမယ့်စောက်ဖုတ်ထဲမှာယားနေတုံးပဲ…အလိုးခံချင်နေသေးတယ်…။ကိုကိုသူငယ်ချင်းလီးကြီးက…ဘောင်းဘီထဲမှာဖုထွက်နေတာကြည့်ပြီး…အသဲတွေယားပြီးစောက်ဖုတ်ထဲကပါလှိုက်လှိုက်ပြီး ယားလာတာ ဟိဟိ”
” ဒါဆိုသူ့လီးနဲ့ အရင်ခံမှာပေါ့ ဟုတ်လား ”
“ကိုကို့သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်ပါအုံး…အမောပြေပြီလားလို့…ချစ်ချစ်က ရယ်ဒီပါလို့ ”
“ကောင်းလား ကို ”
“အေးပါကွယ် ဟုတ်ပါပြီ ချစ်ချစ် သဘော ”
“အားပါးပါး…မိုက်တယ်ကွာ…ဖြေးဖြေးနဲ့အဆုံးထိဝင်အောင်သွင်းတော့ ကွာ ”
ချစ်ချစ်ကခြေထောက်တွေကို…ပခုံးထိအောင်ဆွဲတင်လိုက်တော့…ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်ကမွှေ့ယာနဲ့လွတ်ပြီး…ဖင်တွေပိုကော့လာတယ်။စောက်ဖုတ်လဲပိုကော့လာတယ်။ဘော်ဒါလဲ..မွှေ့ယာပေါ်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပဲထောက်ထားပြီး…နောက်လက်တစ်ဖက်ကနို့တွေကိုညှစ်ရင်း…ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေတာဆီးခုံချင်းရိုက်မိလို့ထွက်လာတဲ့..’ဖတ်ဖတ်’ဆိုတဲ့အသံတွေ…အရေတွေရွှဲနေတဲ့စောက်ဖုတ်ထဲ..လီးဝင်ထွက်နေတဲ့အချိန်ထွက်တတ်တဲ့ ‘ပျစ် ပျစ် ပလွတ် ပလပ် ‘ဆိုတဲ့အသံတွေရော…
“အား ကောင်းလိုက်တာကွာ ချစ်ချစ်ပြီးချင်လာပြီ”
“ချစ်ချစ် ပြီးသွားအောင် ကိုကို ဆက်လုပ်ပေးရမလား” လို့မေးလိုက်တယ်။
“ချစ်ချစ်ပေးသမျှအပြစ်ကိုခံပါ့မယ် ..ကျေနပ်ပြီလား.. ဘယ်လိုအပြစ်ပေးမှာလဲ…ပြောပါအုံး ”
ဆိုပြီး…ဘော်ဒါကိုလှမ်းပြောတယ်။ဘော်ဒါလဲပက်လက်လှန်လိုက်တော့…ချစ်ချစ်ဘော်ဒါရဲ့ အပေါ်ကနေ..ပြောင်းပြန်တက်ခွလိုက်ရင်း. ..
“ကောင်းပါတယ်ကိုကိုရ…သူ့ကိုအပြစ်ပေးတာလေ…ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ထဲကထွက်လာတဲ့…အရေတွေနဲ့သူ့ကိုပွတ်ပစ်မှာ..ဟိုလူကြီး..ရှင်လက်မခံ ချင်ရင် ရတယ်နော်”
” ချစ်ချစ်..ဘာခိုင်းခိုင်းလုပ်ပါ့မယ်လို့ပြောပြီးသားပဲလေ.. ဒါမျိုးဆိုလို့ကတော့လာထားပဲ ”
“ကိုကိုလဲမြန်မြန်လုပ်ပေးကွာ… ပြီးချင်လာပြီ ”’
“ကောင်းလားဟင် ချစ်ချစ် ”
” ခဏတော့နားမယ်လေ ”
“စောစောက..ချစ်ချစ်ကိုကိုသူငယ်ချင်းကို..ပြောနေတာလေ သူနဲ့နောက်ပေါက်ကိုမြည်းမလို့ဆိုတာလေ..အဲဒါတစ်ကယ်ပြောနေတာလား ”
“အဲဒါကြောင့်….မြည်းကြည့်ချင်တာလေ..အရသာတော့ ရှိမှာသေချာတယ်..ခိခိ ”
“ကောင်းတာပေါ့…ချစ်ချစ်လဲအဲလိုစမ်းကြည့်ချင်နေတာ… ပြောရမှာရှက်လို့..ခိခိ…အရင်ကကိုကိုနောက်ကိုလုပ်ရင်း.. ရှေ့ကိုအတုနဲ့လုပ်ပေးတာတောင်..ဒီလောက်ကောင်းတာ ”
“ကဲ… ဘယ်လိုအဲဒါဆိုစမှာလဲ…ကိုကိုတို့ကချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်းလုပ်မှာ”
“အဲဒါဆို ဒီလိုလုပ်မယ်လေ…ဟိုလူကြီးနဲ့နောက်ပေါက် အရင်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်…ပြီးတော့မှကိုကိုပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့…ဟိုလူကြီးနောက်ပေါက်ကိုသွင်းနေတုန်း..ကိုကိုကပိပိလေးကိုပွတ်ပေးနေနော်….”
“ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ်..အစိလေးကိုပါပွတ်ပေးပြီး အထဲကိုပါ နှိုက်ပေးအုံး ”
“ကိုကို လုပ်တော့ကွာ ရှေ့က အရမ်းယားနေပြီ ‘”
‘ပြောတာနဲ့ အခွေထဲကအတိုင်း..သူ့ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီးစောက်ဖုတ်ထဲကိုသွင်းလိုက်တယ်။စောက်ဖုတ်က၀င်လာတဲ့လီးကို..ညှစ်ပေးနေတာများကောင်းလိုက်တာ။အောက်ကဘော်ဒါကလဲကော့ပေးနေတော့…သူ့လီးဝင်ထွက်နေတာကိုပါစောက်ဖုတ် ထဲကနေသိနေရတယ်။